Imba yekurara | Art sens - mazano eimba nebindu Peji 2
Hupenyu hwedu hwave kuwedzera nesimba uye isu tinoratidzwa zuva nezuva
Yakashongedzwa zvakanaka uye yakashongedzwa, imba yekurara inoshandura kuva yakanaka
Pfungwa shoma dzekamuri yekurara uye isina kujairika. Sunungura zvaunofungidzira,
Sarudza iwo mavara eimba yako yekurara. Mune zvemukati zvemukati zvinogoneka
Imba yekurara yepepuru
Ipepuru ndeyekuyeuchidza kwemavara earistocracy uye yakasvibirira. Vanhu vanofarira uyu
Nzvimbo nyowani yemukati yekuberekwazve kweyekare ficha. Chimiro chevintage chiri kunetsa
Mafashoni mazhinji anozivikanwa mukushongedza kwemukati. Uchaita sei
2 peji kubva ku2«Pakutanga12